कुन बार जन्मिएका मानिस कति भाग्यमानी र धनी ?जान्नुहोस आफनो भाग्य ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
कुन बार जन्मिएका मानिस कति भाग्यमानी र धनी ?जान्नुहोस आफनो भाग्य !
काठमाडौं । भनिन्छ मानिसले आफ्नो जन्मसँगै आफ्नो भाग्य पनि लिएर आएको हुन्छ । हाम्रो समाजमा भनाइनै छ नि छैठींमा लेखेको कुरा मेटेर मेटिदैन । यसको अर्थ हो हामी जन्मेको बार र समयले हाम्रो भाग्य निर्धारण गर्छ जस्लाई हामी चाहेर पनि परिवर्तन गर्न सक्दैनौ. । हाम्रो धार्मिक मान्यता अनुसार हामी जन्मेको बार अनुसार हाम्रो स्वभाव, आनीवानी , भाग्य र धन प्राप्तिको योग हुने गर्दछ ।
जानी राखौं कुन बार जन्मिएका मानिसको भाग्य र धनयोग कस्तो हुन्छ ?
यो बार जन्मिएका मानिसहरु भाग्यशाली र लामो आयुका हुने गर्दछन । उनीहरु कम बोल्ने , कला र शिक्षामा अगाडी हुन्छन । यिनीहरु धार्मिक आस्था राख्ने र घरपरिवारलाई सुख दिने खालका हुन्छन । यिनीहरुको जिवनमा २० देखि २२ बर्षको उमेरमा कष्ट आउने गर्दछ । यो बार जन्मिएका स्त्री बलशाली र चतुर हुन्छन ।
यो बार जन्मिने मानिस विद्धान,मिठो बोल्ने ,कलामा कुशल र बहादुर हुन्छन । यिनीहरुको जिवनमा सुख दुख बराबर हुन्छ । यिनीहरुलाई ९,१२ र २७ बर्षको उमेरमा कठिन समय आउछ । यो बार जन्मिएका व्यक्तिलाई श्वासप्रश्वास सम्बन्धि रोग पनि देखा पर्न सक्छ । यो बार जन्मिने स्त्री सुन्दर, शान्ति प्रिय र मधुर भाषी हुन्छन ।
यो बार जन्मिने मानिस उग्र स्वभावका हुन्छन । यिनीहरु धनी भएता पनि मानिसलाई खुसि राख्न सक्ने खालका हुदैनन् । यिनीहरुलाई छाला सम्बन्धि रोगले सताउछ । त्यस्तै मंगलबार जन्मिएका स्त्रीहरु कठोर हृदयका हुन्छन । यिनीहरुमा माया, दया हुदैंन र झगडालु पनि हुन्छ ।
यो बार जन्मिएका मानिसहरु धर्म कर्ममा रुची राख्ने खालका हुन्छन । यिनीहरु मिठो बोल्ने र सबैको मन जित्ने खालका हुन्छन । यिनीहरु लाई ८ र २२ बर्षमा दुख पाउने योग रहेको हुन्छ । यो बार जन्मिएका स्त्री कुनै क्षेत्रमा विशेष रुची भएका हुन्छन भने त्यस बिषयमा बिशेषज्ञता हासिल गर्दछन । उनीहरुमा सरस्वतीको बिशेष कृपा हुने हुदाँ यिनीहरु सुन्दर र शुशील हुन्छन ।
यो बार जन्मिएका मानिस सवद्धान र पराक्रमी हुन्छन । यिनीहरुले जिवनमा अनेक उतार चढाव आएपनि शाहसी रुपमा पार गर्दछन । ७, १२ १३, १६ र ३० बर्षकोे उमेरमा यिनीहरुलाई संकट आउछ । यो बार जन्मिएका स्त्रीहरु उच्च शिक्षा हासिल गर्ने र सर्वगुण सम्पन्न हुन्छन ।
यो बार जन्मिएका मानिस हसिलो र मिठो बोल्ने हुन्छन । यिनीहरु बुद्धिमान र सहनशील हुन्छन । यिनीहरुलाई २० र २४ बर्षमा कष्ट पर्न सक्छ । यो बार जन्मिएका स्त्रीहरु चञ्चल स्वभावका हुन्छन । यिनीहरु काला भए पनि सुन्दर हुन्छन । यस्ता स्त्रीहरु मस्ती मजाक गर्ने भएपनि आफन्त र परिवारको इज्जत राख्ने खालका हुन्छन ।
यो बार जन्मिने मानिसहरु प्रविधि र कृषि व्यापारमा रुची राख्ने हुन्छन । यिनीहरुको बाल्यकाल कष्टपूर्ण हुने गर्दछ । यिनीहरु लगनका साथ आफनो काम पूरा गर्ने खालका हुन्छन । यो बार जन्मिने स्त्रीहरु सुन्दर र चञ्चल हुन्छन ।
जानी राखौं कम्प्युटरका सर्टकट फर्मूलाहरु
असोज ३, काठमाडौं । कम्प्युटर हाम्रो दैनिक जिवनको अभिन्न अंग जस्तै बनेको छ । २१ औं शताब्दीको यो […]
यी महान आत्मा जसलाई यमराजले समेत साथ लान सकेनन्
काठमाडौं । हिन्दुहरुको महान ग्रन्थ गीतामा भनिएको छ 'संसारका हरेक चिज नाशवान छन' अर्थात जन्म सँगै हरेकले […]
कहिल्यै सफल हुदैंन यी दुई राशीका मानिसको प्रेम वा विवाह
एजेन्सी। ज्योतिषशास्त्रको अनुसारमानिसका १२ ओटा राशी छन । प्रत्यक राशीका मानिसको आफ्नै विशेषता, रोजाइ र […]
बच्चालाई तेल मसाज गर्दा हुन्छ यी फाईदाहरु
असोज, काठमाडौं । हामी सबै नवजात शिशुको हेरचाहमा विशेष ध्यान पुर्याउने गर्दछौं । भनिन्छ बच्चा भनेका काचो […]
खानासँगै पानी खाँदै हुनुहुन्छ ? होसियार
पानी पर्याप्त मात्रमा खानु स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ। वास्तवमा पर्याप्त पानी बिना शरिरले राम्ररी […]